Sidee BoomTown u Dhameystirtay Iskudhinteeda Martech ee Sirdoonka Wicitaanka | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 8, 2016 Talaado, Nofeembar 8, 2016 Wabiga Pearce
Wadahadalka, iyo gaar ahaan wicitaanada taleefanka, waxay sii wadaan inay ka mid noqdaan hababka ugu wax ku oolka badan ee lagula xiriiro dadka loona rogo macaamiil daacad ah. Taleefannada casriga ah ayaa xiray farqiga u dhexeeya daalacashada khadka tooska ah iyo wicitaannada - iyo marka ay timaaddo wax iibsasho adag, oo qiimo sare leh, dadku waxay rabaan inay taleefanka la soo hadlaan oo ay la hadlaan qof bani'aadam ah. Maanta, tiknoolajiyad ayaa la heli karaa si loogu daro aragti ku saabsan wicitaanadan, sidaas darteed suuqleydu waxay sameyn karaan isla caqli, go'aanno xog ku saleysan oo ku saabsan wicitaannada ay u sameeyaan wadiiqooyinka dhijitaalka ah.
At BoomTown, waxaan si weyn u maal gashanay wac tikniyoolajiyadda sirdoonka. Waxaan nahay shirkad softiweer iib ah iyo suuq geyn ah oo ka caawisa shirkadaha guryaha dhisida inay xiraan heshiisyo badan. Marka la eego xalkayagu wuxuu ku yaalaa qiime shan-god ah, macaamiisheenu si fudud uma iibsanayaan - ama xitaa u ballan qaadaya demo - ka hor intaanay taleefanka kula soo dirin iibiyaha iibka. Sidaas darteed, taleefannadeennu mar walba way dhacayaan.
Qayb ahaan, taasi waa nooca ganacsigeenna. Real Estate folks waxay jecel yihiin inay hadlaan - iyagu waa xirfadlayaal wada sheekeysi, waxayna jecel yihiin inay ku ganacsadaan taleefanka. Laakiin sidoo kale waa dabeecadda ganacsiga maanta: dadku waxay raadinayaan, daalacanayaan oo ay ka soo wacayaan taleefannadooda markay u socdaan jidka wax iibsashada. Waa muhiim in kooxdeena suuqgeyntu ay leeyihiin aragti ay ku raadjoogaan, ku falanqeeyaan uguna fiicnaadaan wicitaanadan soo galaya, iyo in kooxdayada iibku u qalabaysan yihiin inay ka jawaabaan wicitaanada ay u badan tahay inay beddelaan.
Waxaan maal gashanay Codka Suuqgeynta Codka Invoca in lagu daro lakab aragti ah oo ku saabsan kanaalka kooxdayada iibinta ay adeegsato inta badan. Xogtan dheeriga ah waxay u oggolaaneysaa kooxahayaga suuq-geynta iyo iibinta inay si wax ku ool ah u wada shaqeeyaan - dib-u-celintayadu waxay qaadan karaan wicitaanno dheeri ah waxayna ka heli karaan qiime badan mid kasta, kooxdayada suuqgeyntu waxay u aaneyn kartaa ololaheena hoggaamiyeyaasha u beddelaya taleefanka.
Kaliya markaan daarno Invoca, waxaan isla markiiba kala badh ka dhignay kharashkeena halkii macdano (CPL) Tani waa sababta oo ah waxaan awoodnay inaan u nisbeyno dhammaan taleefannadeennu inay horseed u yihiin ololeyaal dijitaallo kala duwan oo rajo laga qabo ama macaamil la falgalay ka hor inta uusan na soo wicin. Waxaan baranay in qofna uusan wicin oo uusan sharrax ka bixin faahfaahinta sida ay nooga maqleen - waxaan arki karnaa inay raadinayeen erey, guji xiriiriye, baaritaan yar sameeyeen, kala hadleen saaxiibo kooban fursadaha, oo ay waceen taleefan. . Jidkan adag ee wax iibsashada ah, waxay u sheegi karaan iibiyayaasheenna iibka ah ee ay naga maqleen “eray-af-ah”.
Waxaan aaminsanahay wicitaanka wicitaanku inuu yahay mid daruuri u ah ganacsiga maanta, waxaana jira waxyaabo aan bartay oo ka caawin kara suuqleyda kale inay ku bilaabaan tikniyoolajiyaddan cusub ee suuq geynta ah.
Bilaabida sirdoonka wicitaanka
Waxaa jira waxyaabo yar oo ay tahay in la raadiyo marka la qiimeynayo dadka bixiya sirdoonka wicitaanka. Midka hore waa galinta nambarka firfircoon. Gelinta lambar diimeed waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku beddesho lambarka taleefanka shirkadda istiraatiijiga ah hantida suuqgeynta - bogga soo degitaanka, eBook ama bogga qiimeynta bogga, tusaale ahaan - oo leh lambar gaar ah oo ku xiran ilaha wicitaan kasta. Taas macnaheedu waxa weeye waad arki kartaa xogta granular sida erayga furaha ah ee qofka soo waca uu baadhay, xayeysiiska ay gujiyeen, iyo bogagga shabakadaada ee ay daalacdeen ka hor inta aysan taleefanka qaadin.
Adoo adeegsanaya Invoca, wakiilka iibka ayaa arki kara dhammaan macluumaadkaan markii taleefanku dhacayo. Waxay sidoo kale leeyihiin meelo kale oo xog qaali ah, sida dakhliga qofka soo waca, taariikhda iibsiga iyo tirada dadka, taas oo ka siinaysa sawirka qofka dhinaca kale ee khadka. Waxaan kugula talineynaa inaad u adeegsato macluumaadkan si aad u wicisid wicitaanka wakiilka ku habboon waqtiga-dhabta ah - macaamiisha jira ama rajada VIP ee iibiyahaaga ugu fiican, tusaale ahaan.
Waxaa muhiim ah in la adeegsado barxad si wanaagsan ula falgalay suuq geyntaada iyo tikniyoolajiyada iibka ee jira. Waxaan u adeegsanaa Invoca's Facebook-dhexgalka si loo fahmo waxtarka ololaheena xayeysiinta bulshada; Tani waxay na ogeysiinaysaa kuwa naga soo wacay saamayn ay ku yeesheen xayeysiisyada Facebook ee safarkooda. Tani waxay si gaar ah faa'iido u leedahay hadda waxaan leenahay xayeysiis gujin-ka-wac midig oo ku yaal Bogga Nooca Facebook iyo xayeysiimahayada Facebook.
Isdhexgalka Salesforce wuxuu noo ogolaanayaa inaan dhex galno xogta macaamiisheena isla markaana aan u dhisno astaan ​​hormuud u ah wicitaan kasta. Wakiilladeenu way arki karaan halka wicitaanku ka yimid, yaa khadka ku jira iyo wixii la macaamil hore ah ee ay la sameeyeen shirkadeena. Tani waxay ka saareysaa wax badan oo ka mid ah jooji oo bilow dhinaca wicitaanada bilowga ah; iibka iibka ayaa si fudud u xaqiijin kara faahfaahinta ay horey u haysteen.
Wicitaanada gaagaaban waxay rajada ka dhigayaan kuwo faraxsan waxayna muujinayaan inaan qiimeyno waqtigooda. Tani waxay sidoo kale fasaxday waqtigeenna - kooxdayada iibinta waxay qaadataa qiyaastii 1,500 wicitaan bishii, iyo tikniyoolajiyaddan ayaa jartay muddada wicitaannadaas illaa 1.5 illaa 2.5 daqiiqo midkiiba. Tani way xoroowday saacadood bil kasta oo soo noqnoqota waxay ku bixin kartaa abuuritaanka ganacsi badan.
Waxaad sidoo kale dooneysaa barxad kuu oggolaaneysa inaad falanqeyso waxyaabaha ku jira wadahadalka ka dhacaya taleefanka si aad saameyn ugu yeelatid ololeyaasha barbaarinta mustaqbalka - ama mararka qaarkood, u isticmaal macluumaadkaas adigu ma samayn kobciso macaamiisha horey ugu soo iibsaday taleefanka. Tani waxay dareemi kartaa dhagaha dhagaha macaamiisha kuwaas oo sii kordhaya filaya in shirkaduhu ay bixiyaan adeegyo shakhsi ahaaneed oo ku saabsan kanaallada.
Isku Diyaarinta Guusha
Waxaan hadda arki karnaa halka wicitaanadeena ay ka imaanayaan, yaa khadka ku jira iyo macnaha guud ee wicitaanka. Si loo sameeyo nidaam shaqadan oo kale ah, waxaan kugula talin lahaa inaad qaado talaabooyin aasaasi ah si aad u hesho aragti dheeri ah oo ku saabsan wicitaanada soo gala:
Ku dhiirrigeli lambarada taleefanka boggaaga guriga, bogga qiimaynta iyo kanaal kasta oo suuq-geyn ah oo aad haysato - bulsho, raadin, waraaqo caddaan ah, webinarro, dhacdooyinka shirkadda, xitaa boodhadhka. U fududee dadka inay kuu soo wacaan.
Ku maalgeli xayeysiiska gujinta-ka-wac ee ku saabsan xayeysiiskaaga bulsheed iyo raadinta, sidaa darteed dadka raadinaya ama ka baaraya moobiilka ayaa riixi kara batoon si toos ahna way kuu soo wici karaan.
U isticmaal lambarrada taleefannada firfircoon hanti kasta, habkaas waxaad mar walba u arki kartaa halka ay wicitaannadu ka imanayaan. Waxay muhiim u tahay hagaajinta suuq geynta ROI.
Bilow inaad ka fikirto wicitaanada sidaad u malayn laheyd hantidaada dhijitaalka ah - oo aad dalbato isla heer aragti ah oo ku saabsan waxa shaqeeya iyo wixii aan shaqeynin.
Wax badan ayaan ka baranay jidka waxaanna ka helnay qaar ka mid ah fikradahayaga inay khaldan yihiin. Markii hore, waxaan filaynay wicitaanka sirdoonka si loo kordhiyo tirada guud ee hogaaminta. Tani ma ahayn sidaas - laakiin inaan fahan dheeri ah ka helno kuwa na soo wacaya iyo ololeyaasha saameynta ku yeeshay dhaqankooda waxay noqdeen kuwo aad u qiimo badan. Waxaan buuxinay farqiga muhimka ah ee tikniyoolajiyadeena suuqgeynta, waxaan u habeynay wicitaano qiimo sare leh oo horseedaya isbadal badan, waxaanna u abuurnay khibrada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee dadka doorta inay na soo wacaan.
Tags: wac sirdoonraad raadinwac tikniyoolajiyadda raadraacakharashka halkii horseedraadinta wicitaanka facebookwicitaanada facebooku yeedhid
River waa Agaasimaha Suuqgeynta BoomTown, Madal ma guurtada ah oo internetka ah oo saldhigeedu yahay Charleston, SC. Webiyadu waxay in ka badan 9 sano khibrad u leeyihiin suuqgeynta internetka iyo booska xayeysiinta, iyagoo la shaqeynaya shirkado badan oo Fortune 500 ah oo ku baahsan ganacsiga elektaroonigga ah, safarka iyo tooska guryaha.